Ngwaahịa - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Machinelọ ọrụ CO2 Galvo Laser
Igwe eji Agwọ Dijitalụ Laser Die
CO2 Laser cutter osise
Ngwunye osisi tube / Pipe Laser
Mpempe akwụkwọ mpempe ígwè
Dual Metal Sheet & Cutube
Akpaaka & Aviation
Segbọ ala oche
Nnukwu mkpuchi ikuku
Ihe ngosi Sand Sand Discs
Label, Adhesive, Tepes Reflective
Ejiji na Uwe
Akpụkpọ anụ Laser maka akpụkpọ ụkwụ
Kapeeti, Mat & Rug Cut
Akwukwo ahihia Sandfo
Nnwale nke ihe
Banyere Golden Laser (PDF)
Ọkwọ ụgbọ ala
Kedu ihe kpatara Laser Golden
Model Mba: CJGV-160130LD
Cutter ihe eji eme ihe eji acha odo odo
Laser ọhụụ dị mma maka ịkpụ akwa mbipụta akwụkwọ mbipụta akwa nha nke ụdị ọ bụla na nha. Ndị kamera nyochara akwa ahụ, chọpụta ma mata contour e biri ebi, ma ọ bụ bulie akara aha edepụtara ma bee ngwa ngwa ahọpụtara.
Model Mba: CJGV-190130LD
Ọkpụkpụ Laser ịkpụ ọhụụ maka Sublimation Edere Akwụkwọ Iwu
Mbelata laser na njirimara Ọhụụ na-eje ozi dị ka usoro laser laser zuru oke maka ịmechasị ákwà na-ebi akwụkwọ. Ndị kamera nyochara akwa ahụ n'oge ebufe, chọpụta dọkụmentị edepụtara ma ọ bụ gụọ akara ndebanye…
Model Mba: QZDXBJGHY-160100LDII
Independent igwe ọkwọ ụgbọ oloo nke oria Laser
Ejikọtara usoro abụọ nke laser nke nwere onwe ya nke ọma na sistemụ smart, ma na-ebuli n’ime ihe ndị achọrọ nhazi nhazi eserese.
Model Mba: MZDJG-160100LD
Akwụkwọ ikike Laser Cutter GoldenCAM
Nnukwu ndebanye aha dị elu debere akara na nrụzigharị nnuku ọgụgụ isi maka ịkpụzi ọnụnọ nke akwụkwọ mbipụta, akwụkwọ ozi na nọmba.
Model Mba: QZDMJG-160100LD
Ọkpụkpọ Smart Vision Laser nwere igwefoto maka contour Cut
Nke a bụ igwe laser siri ike maka ịkpụ nsị. N'ihe eji igwefoto HD gosipụtara, igwe nwere ike were foto nke usoro dijitalụ e biri ebi ma ọ bụ kpuchie ya, mata njigharị nke usoro wee nyezie nkuzi maka isi laser iji wee rụọ.
Model Mba: CJGV-320400LD
Wide Format Laser cutter maka Big ọkọlọtọ, Ọkọlọtọ, Soft signage
The laser cutter ọhụụ bụ n'ụzọ pụrụ iche maka ụlọ ọrụ dijitalụ na - ebi akwụkwọ - na - emepụta ike na - enweghị atụ maka ịmecha ụdị ederede dị iche iche edepụtara ma ọ bụ nke a na - eji akwa akwa, blọgụ na akara dị nro.
Model Mba: JMCCJG / JYCCJG Series
High Speed ​​Industrial Textile Fabric Laser tingcha Machine
Edebere usoro a CO2 flatbed laser machine machine nke emere akwa nke akwa akwa na ihe dị nro na-akpaghị aka ma na-egbusi oge niile. N'ịbụ onye eji eriri na oche ya na servo moto, onye na-ahụ ọkụ laser na-enye oke ọsọ na mwepu kachasị.
Model Mba: JMCCJG-350400LD
Laser tingcha Machine maka iyo Cloth, Myọcha Materials, iyo Media
Elu igwe eji eme ihe na akwa akwa. Speedkpụcha ọsọ ruo 1200mm / s. Laser CO2 RF 150W ruo 800W. Sistem na-ebugharị Vacuum. Na-enye onwe ya nri ya na ndozi esemokwu. Kwesịrị ekwesị maka ịkpụ akwa nzacha, akwa mkpuchi, polyester, PP, fiberglass, PTFE na akwa ụlọ ọrụ.
Model Mba: JMCCJG-250350LD
Airbag Laser Cutting Machine na otutu Nhazi
Azịza ọla edo edobere maka ịchapu laser airbag dị mma, nchekwa na ịchekwa, na-aza maka mmụba na ịmụba akpa ikuku dị ka ụkpụrụ nchekwa ọhụrụ chọrọ.
Model Mba: JMCCJG-160200LD
Igwe CO2 Laser maka Svenve Heat Shrinking Heverve
Ọkpụkpụ Laser ọkachasị maka uwe na - egbochi okpomoku kpo oku nke PET (polyester) eriri ọkụ na mbelata polyolefin. Enweghị mmebi nke mbepụ n'ihi ịkpụ laser n'oge a.
Model Mba: JMCZJJG (3D) -250300LD
Mkpochapu Mkpochapu bekee
Nchikota nke uzo X buru ibu, Y axis laser cutings (trimming) na elu Galvo laser perforating (oghere nke laser). Ezubere ya maka mkpo ahihia mapuct (sock duct, sox duct, soct sox, soct sock), akwa ikuku, soks ikuku (soks).
Model Mba: JYCCJG-160600LD / 160900LD / 1601300LD
Igwe eji egbu osisi Mpempe Laser Ultra-ogologo
Model Mba: JMCZJ (3D) 160100LD
Igwe igwe CO2 Galvo Laser ya na Conveyor maka Engraving Cutting
3D usoro Galvo laser 3D siri ike
Otu oge nhazi 450 × 450mm
Ike nke enweghị mkpụrụ osisi na-adọkpụ ruo 1600mm
Nyefee iji tụgharịa ike
Model Mba: JMCZJJG (3D) 170200LD
Galvo & Gantry Laser engriving igwe maka ịcha akwa, akpụkpọ anụ
Usoro laser a na - agwakọta galvanometer na XY gantry. Ndị Galvo na-enye ihe osise dị elu, na-akụ azụ, na-agbacha ma na-egbutu ihe dị mkpa. XY Gantry na-enye ohere nhazi profaịlụ buru ibu na ngwaahịa buru ibu.
Model Mba: ZJJF (3D) -160LD
Nyefee gaa na igwe na-acha ọkụ na-akpụ akpụ Laser
3D usoro Galvo 3D siri ike, na-eme akara akara na-aga n'ihu. “Na ijiji” teknụzụ laser. Kwesịrị ekwesị maka akwa akwa usoro, akwa, akpụkpọ anụ, denim, ihe osise EVA.
Model Mba: ZDJMCZJJG-12060SG
SuperLAB | XY Gantry & Galvo laser igwefoto CCD
SuperLAB, akara akara laser, ihe osise laser na ịkpụ laser, bụ ebe nchekwa CO2 laser nhazi maka enweghị igwe. Ọ nwere ọrụ nke iji ọhụụ mee ihe, otu mgbazi bụ isi na mgbado akpaaka…
Model Mba: ZJ (3D) -170200LD
Galvo Laser Akpụkpọ anụ Mpempe akwụkwọ maka forlọ Ọrụ Egwuregwu akpụkpọ ụkwụ
Oke ọsọ na nnukwu usoro laser osise, perforating na ịkpụ. Igwe ọkwọ ụgbọ ala abụọ nwere nhazi ihe eji eme gia. Usoro kachasị mma nke galvanometer.
Model Mba: ZJ (3D) -9045TB
Igwe eji eme akwa akpụkpọ ụkwụ Galvo Laser maka akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ
Laser metal CO2 RF 150W 300W 600W. Usoro njikwa ike dị ike galvanometer. Na akpaghị aka na elu ala axis. Automatic mechiri emechi zinc-iron alloy honeycomb na-arụ ọrụ tebụl.
Model Mba: MARS usoro
MARS Series CO2 Laser Cutting na igwe Ngwunye
Usoro nke MARS gosiputara uzo igwe anyi nke CO2 ma ndi ahia jiri ya maka ịcha na izoputa akwa, akpukpo ahu, osisi, akwara, plastik na otutu ndi ozo.
Model Mba: MJG-160100LD / MJGHY-160100LD II
Single Isi / okpukpu abụọ Isi Laser Cutting Machine na Conveyor Belt
1600mmx1000mm (63 ″ x 39 ″) ebe ọrụ
Ihe eji ebu akwa na-agagharị na onye na-ere mpịakọta
Ndị isi laser abụọ na-ekwe ka egbue akụkụ abụọ n'otu oge
Model Mba: MJG-13090SG
Igwe eji igwe eji osisi eletriki belata
1300mm × 900mm (51 ”× 35”) ebe ọrụ
Motorized lift worktable
Igwe laser carbon CO2 iko 80 wat ~ 150 watts
Tebụl mmanụ acomụ na nhọrọ okpokoro mma
Model Mba: XBJGHY-160100LD II
Independent Dual Head Akpụkpọ anụ Laser ịkpụ akpụkpọ ụkwụ
Isi abụọ laser nke na-arụ ọrụ onwe ha nwere ike ibelata eserese dị iche iche n'otu oge. Enwere ike mechaa usoro laser dị iche iche (ịkpụ laser, punching, scribing, wdg) n'otu oge.
Model Mba: ZDJG-3020LD
Akpaaka Laser akpaka nwere igwefoto CCD na onye na-ebugharị Roll
Mpaghara ọrụ 300mm × 200mm
kwesịrị ekwesị maka ịkpụ akara kpara, rịbọn, webbing, Velcro kwụsịrị mpịakọta n'ime 200mm n'obosara
Model Mba: ZDJG-9050
CCD Camera Laser cutter maka kpara Label, kpara akpa
Laser cutter nwere igwefoto CCD n’elu ya. Ezubere nke oma maka aha ndi kpuru ihe, ndi na akpa ihe na ihe ojoo.
Model Mba: LC-350
Nyefee gaa na igwe nkedo bọọlụ
Igwu laser na-adighi egbu egbu na itughari uzo maka imecha akara. Onye na-agụ koodu QR na-akwado mgbanwe mgbanwe akpaka na elu elu. Ntuziaka weebụ BST na-eme ka ịchọgharị ma na-atụgharị karịa.
Model Mba: LC-230
LC230 bụ kompeni, kompeni na ngwa igwe laser ngwụcha dijitalụ kachasị obosara 230mm. Ọ bụ nhọrọ magburu onwe ya maka obere ọsọ dijitalụ. Nweputa mgbanwe na oge adighi agha riri onu.
Model Mba: LC230
Igwe eji egbutu osisi Laser Die nke ihe nkiri / nyefe ihe nkiri
Ihe eji egbu egbu nke Laser, nke zuru oke maka ụlọ ọrụ akwa hụkwara elu. Akpaaka usoro. Kpamkpam ịkpụ laser
Model Mba: P2060A / P3080A
Akpaaka Lober Fiber Laser Pipe Cutting Machine
Igwe na-arụ ọrụ laser na-arụ ọrụ dị elu na nbudata na akpaghị aka. Roundchapu gburugburu, akụkụ anọ, akụkụ anọ na profaịlụ tube ndị ọzọ iji gboo ọtụtụ mkpa ịkpụ ọkpọ.
Model Mba: P2060 / P3080
Igwe eji egbutu osisi Laser
Nke a ọkara akpaka laser tube ọnwụ igwe nwere onwem akwụkwọ ntuziaka na mejupụtara mejupụtara mepụta akụkụ ndị dị elu n'ọtụtụ dịgasị iche iche na nha.
Model Mba: GF-1530T / GF-1540T / GF-1560T
Mpempe akwụkwọ Mpempe igwe na igwe eji egbu osisi ịkpụ ọkụ
Ejikọtara ọnụ na-enye ọrụ maka ịkpụ akụkụ maka mpempe akwụkwọ na tube. Laser ike 1KW ~ 3KW, Mpaghara ịkpụ 1.5 × 3m, 1.5 × 4m, 1.5 × 6m, ogologo tube 3m, 4m, 6m, Φ20-200mm
Model Mba: GF-1530JHT / GF-1560JHT / GF-2040JHT / GF-2060JHT
Pipe Laser Pipe Fiber Laser na igwe Mpempe Mgbado Mpempe Akwụkwọ zuru ezu
Igwe na –eme akwa fiber laser arụmọrụ nwere ihe mkpuchi kpuchie ya nke ọma, tebụl mgbanwe na ngwaọrụ na-ebeji tube. Epeepe igwe na ọkpọkọ nwere ike wedata n’otu igwe.
Model Mba: P2080
Tube Laser Cut Cut Machine P2080
Karịsịa maka ịkpụ laser metal tube nke gburugburu, square, akụkụ anọ, triangle, oval, ukwu tube na ndị ọzọ akpụ tube & anwụrụ. Ogologo ya nke tube nwere ike ịbụ 20-200mm, ogologo 8m.
Model Mba: GF-2560JH / GF-2580JH
6000W 8000W Fiber Laser Cut Cut Machine
Ike dị elu na nnukwu usoro fiber laser cutter. Onye na-ahụ maka CNC BECKHOFF. 2,5m × 6m, mpaghara 2.5m × 8m. Oke kachasị ịkpụ 30mm CS, 16mm SS
Ọkpụkpụ Laser Ọhụụ
Flatbed Laser Ọkpụkpụ
Dijitalụ Laser Die Cutter
Obere CO2 Laser Cutter
Akpụkpọ anụ & Akpụkpọ ụkwụ
Kapeeti & Mats
Ọ B C CATALOG
Ihe Nleba Anya N’uwa N’uwa
Ogige Ulo Oru Golden Laser, ianzọ Tianxing, Hengdian Street, Chuanlong Avenue, Huangpi District, Wuhan, Hubei, China
Copyright © 2005-2020 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Edebere ikikere nile.